Jam - dessert ezimangalisayo esikhulu ekhaya yemvelo ikhambi lokwelapha izinqubo eziningi ukuvuvukala. Lokhu isidlo esimnandi kuyamangalisa kubantu bonke izinkumbulo ethinta inhliziyo ngokumangalisayo ehlobo esidlule, futhi kwabaningi osizi ongenakulibaleka.
Jam - isidlo kuyalungiswa kusuka izithelo izithelo ushukela. Ngokuvamile kokubili izithako zithathwa ngezabelo alinganayo. Ngakho-ke, kufanele ukhumbule njalo ukuthi ukusetshenziswa lolu hlobo workpiece kumelwe babe abacabangelayo. Lokhu dessert - kumnandi kakhulu, kodwa kungaletha ingozi.
Le ndatshana izozama ukuthola mangaki ama-calories ku ukuminyana ngokuvamile futhi ikakhulukazi endaweni sitrobheli emangalisayo.
Kafushane ku strawberry
Igama lalesi berry emangalisayo wazalwa ngenxa ukuma eyindilinga izithelo. Kwasekusithi kusukela elidala Russian elithi "club" has a ukubaluleka "oyindilinga" noma "eyindilinga".
Sekuyisikhathi eside kungase kutholakale ukuthi yinzuzo okumnandi, amajikijolo amahle ngokumangalisayo. Liqukethe eziningi Antioxidants namavithamini ukuthi inganqoba ezihlukahlukene ukuvuvukala, ukuvimbela ukuguga zobuchopho, ekunciphiseni ingozi inhliziyo futhi semithambo izifo.
Mayelana kilojoule kanye nokwakheka ujamu
Ushukela ngaphezulu sengezwe umkhiqizo osuphelile, lo ikhalori ujamu sitrobheli ngenhla, kanye nanoma yimuphi omunye izithelo noma berry dessert.
Ngokuvamile, noma ikuphi preform calorific inkhulumo lelungiselelwe esekelwe izithelo noma amajikijolo, iyahlukahluka kuye ngokuthi ubumnandi izithelo esetshenziswa, equkethe amanani angalingani fructose. Kuyaqapheleka futhi ukuthi kuncike indlela kulungiselelwa lapho abilayo kwenzeka, okuholela ekuncipheni okuphawulekayo mass. Ekugcineni, nge izindlela ezahlukene womshini dessert for isipuni esisodwa ujamu eseqedile unokuqukethwe ezahlukene carbohydrate.
Kunoma ikuphi, ukusetshenziswa nsuku zonke i-pair yama spoonfuls of jam akusho ziwenza extra, kumlethela umfutho wamandla futhi kuletha izinzuzo emzimbeni, ngoba lo muthi phakathi imikhuhlane. Kodwa esikhathini esifushane kudliwa ebhange yonke ujamu Yiqiniso, kungaba balimaze abalulekile empilweni.
Naphezu caloric okuncane ngokwabo amajikijolo (100 g 30 kcal), e-jam eqeda lesi sibalo kuba eningi. Caloric sitrobheli jamu ivuliwe isilinganiso amagremu 100 umkhiqizo 280 kcal. Ngakho, le jam ebhange (500 ml) strawberry yakhiwa ingqikithi ezingaphezu kuka-1500 kcal.
100 g umkhiqizo ukulungele kufanele: Amaprotheni ashintshwe - 0.3 g fat - 0.17 g, carbohydrate - 74,5 g
Calorie ujamu sitrobheli esiwafundile. Manje ukunquma uma izinzuzo lolu hlobo dessert.
Njengoba kuphawulwe ngenhla, ujamu buyisidakamizwa ezinhle. Izithelo kanye amajikijolo, okuyinto babe ukubunjwa yabo ezihlukahlukene amaminerali namavithamini amaningi, kahle kungathinta impilo nosizo izifo uswidi. Ngokwesibonelo, abantu abaningi bazi ukuthi ewusizo okusajingijolo ujamu ngesikhathi, imikhuhlane ukukhwehlela.
Ingxenye sitrobheli jamu kukhona i-cellulose, organic acid, beta-carotene, nosawoti wamaminerali, amavithamini, amaminerali (iron, magnesium manganese).
izakhiwo awusizo sitrobheli jamu
Ngenxa okuqukethwe e amajikijolo inombolo enkulu kwezakhi kophudingi ezenziwe ngawo, ube nomthelela omuhle empilweni yomuntu. strawberry Jam kutshengisa izakhiwo antioxidant zemvelo, kwandisa-hemoglobin uthulisa isimiso sezinzwa, kuthuthukisa amasosha omzimba, enqanda ukuqwasha, beriberi, kususa izinto eziyingozi ezivela umzimba futhi kuqinise imithambo yegazi.
Futhi, ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo kusiza ukuthuthukisa ekusebenzeni kobuchopho, ukuzinza wegazi, nokugcinwa kokuthula acuity ezibukwayo futhi ukwandisa libido.
Ukuqhathanisa izinhlobo ezahlukene ikhalori ujamu
Ukuze uqonde ukuthi ikhalori sitrobheli jamu ihlukile, cabangela amathuba le dessert esihlwabusayo amajikijolo ahlukahlukene.
Ngezansi zinhlobo ezahlukene sezimoto caloric ngayinye amagremu 100 umkhiqizo osuphelile:
currant - 284;
raspberry - 273;
apula - 265;
cherry - 256;
ugqumugqumu - 220;
Plum - 280.
Ryabinovoye ujamu kokuba izibalo iphansana sama-kilojoule, iqukethe eziningi phosphorus ewusizo. A Berberidaceae, ulwandle lalesi sihlahla, hawthorn, ziyadliwa: Plum kanye nazo-kilojoule amaningi izinhlobo, kodwa they possess izakhiwo kakhulu kwezokwelapha. Nokho, isilinganiso okumele uziqaphele uma esetshenziswa.
Naphezu kuqhathaniswa okusezingeni eliphezulu ikhalori sitrobheli ujamu le dessert esimnandi kungenziwa wabiza abantu abaningi omunye ozithandayo. Nokho kumelwe kukhunjulwe nezingozi zayo.
Ngo inqubo ukupheka incipha okuqukethwe amavithamini kanye nezinye izakhi eziningi ngenxa ukufudumeza ukwelashwa.
Uma uwuphuza berry dessert ushukela uguqulwe amafutha, kancane kancane efaka emzimbeni. Lesi sakamuva izinkinga izimbangela ezempilo, kuhlanganise izimbangela ukukhuluphala. Ukuze ugweme imiphumela enjalo, kungenzeka ukusebenzisa ayiyona ingozi zokupheka ujamu. Ngokwesibonelo, ushukela kancane, kancane ubilise phansi ujamu noma nje ugaye amajikijolo noshukela.
Izinzuzo kanye nezinhlobo zasemazweni